Diyaarad maalintii labaad dul hee haabaysa hawada sare ee Magaalada Buuhoodle | maakhir.com
Diyaarad maalintii labaad dul hee haabaysa hawada sare ee Magaalada Buuhoodle
Buuhuudle:- Diyaara aan la aqoon habyteeda ayaa maalintii labaad dul maraysa hawada sare ee Magaalada Buuhuudle ee Gobolka Cayn,diyaaradaasi ayaa waxa la qeexay inay tahay mid ah nooca loo yaqaan Elicopter taasi oo ku soconaysa jawi hoose,dhamaan dadka deegaan ayaa walaac ka muujiyay hugunka Diyaaradaasi iyaga oo ay dadkoo dhami hadal hayaan.
Dadka deegaanka Buuhoodle ayaa saxaafada u sheegay inay diyaaradaasi mudo laba maal mood ah dul maraysay hawada Sare ee Deegaankaasi iyada oo aan la aqoon ujeedka rasimiga ah ee ay doonayso,dadka qaarkiis ayaa waxay ku tilmaameen diyaaradaasi inay tahay mid ay leeyihiin ciidamada Maraykanka ah ee jooga Biyaha xeebta Bada Cas kuwaasi oo hal kaasi ka ogaadhsanaya waxa ay ugu yeedhaan Argagixiso.
Dad reer guuraa ah ayaa sheegay inay diyaaradaasi saaka hiirtii waa barigii ay arkeen iyada oo fadhida halka lagu magcaabo Xamar laguxidh, waxaana ay halkasi fadhidey mudo gaaban mana jirin cid ka degtey ama raacdey goobtaasi.
Maamulka Gobolka Cayn iyo kan degmada ayaan ilaa haatan wax jawaab ah ka bixin diyaaradaasi mudada dul heehaabaysa hawada sare ee xarunta Gobolka Cayn ee Buuhoodle.
« Wafti ka socda Dawlada Dalka Kenya oo Baydhabo soo gaadhay
Jendayi Frazer oo walaac ka muujisay xaalada Dalka Somaliya »